Indlu encinci,iLake View, igadi yabucala kunye nokupakisha - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKatharina
Indlu encinci yechibi entle eyi-70m2 enegadi yabucala kunye nendawo yokupaka.
Imbono yechibi elimangalisayo ukusuka egadini, i-terrace kunye namagumbi onke.Uyilo lwangaphakathi olulungiselelweyo kunye nengqalelo ephakamileyo kwiinkcukacha. Inoxolo kakhulu, yabucala kwaye izolile, ilungele ukuphumla ngokupheleleyo.
Mfutshane 5 min ukuhamba ukuya kolona lwandle lukufutshane nokufikelela koluntu.
Igadi enelanga ixhotyiswe ngokupheleleyo ngendawo yokuphumla yokuphumla kunye ne-alfresco yokutyela, zombini enembono yechibi elinomtsalane (kunye nendlu kaGeorge Clooney :)
Eyona mbono yokutshona kwelanga kuyo yonke iLake Como!
Indlu encinci inegumbi lokuhlala elibanzi elinendawo yokuphumla kunye neendawo zokutyela, phezulu ukuya ezantsi, iifestile zepanoramic ezinombono omangalisayo wechibi. Igumbi lokuhlala linetafile enkulu yokutyela apho unokuhlala ngokukhululekileyo nabantu abayi-4, kunye nebhedi yokulala (ububanzi be-140cm). Ukusuka kwigumbi lokuhlala kukhokelela kwipaseji eyaneleyo kwigumbi lokuhlambela, ikhitshi kunye negumbi lokulala. Ikhitshi ixhotyiswe ngokupheleleyo kunye nefriji, i-oven, i-microwave, iipleyiti zokupheka zombane ezi-4, umatshini we-espresso kunye nekofu ehambelanayo, i-kettle yeti kunye neendidi ezininzi zeti, kunye nazo zonke izitya zasekhitshini eziyimfuneko (kubandakanywa ne-BBQ encinci ngaphandle). Kukho igumbi lokuhlambela elikhulu elinendawo yokuhlambela, isinki, indlu yangasese kunye negumbi lokuhlambela. Zombini, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela, zineefestile ezinkulu eziya egadini enombono wechibi. Igumbi lokulala linendlu eselunxwemeni ivakale kwaye ijonge echibini emnandi (nakwibhedi yakho!) kunye nokukhanya kwelanga okuninzi. Ixhotyiswe ngebhedi ekhululekileyo kakumkanikazi kunye negumbi elikhulu. Ilinen yebhedi ekumgangatho ophezulu kunye neetawuli ziyafumaneka kuwe.
Igadi inendawo enkulu (kwaye ikhululekile kakhulu ukuba ungayishiya:) ibhedi enekofu enkulu / itafile ye-aperitif (indawo esiyithandayo kuzo zonke) kunye netafile yokutyela enezitulo ezi-4. Kukwakho iperi yebhayinotyhulah kwigumbi lokuhlala, onakho ukubukela iintaka, ukubona iintlanzi okanye ujonge nje iinqanawa ezintle zeRiva :-) Uya kufumana izitulo ezi-2 zaselwandle onokuthi uzihlisele elunxwemeni olukufuphi. .
Ukuhlala apha uya kuba yi-20 min drive kuphela ukusuka kwidolophu yaseComo kunye ne-25 min ukuya eBellagio, okwenza i-Little House ibe sisiseko esifanelekileyo sokuhlola iLake (ibhasi i-C30 emisa i-50 yeemitha ukusuka kwi-Little House, iya kukuzisa zombini i-Bellagio. kunye neComo).
Le yindawo yothando lokwenyani apho umntu anokucima khona kuphithizela kwaye ukonwabele ukuphila kancinci. Sithanda ukucinga ukuba yindawo yabaphuphi behlabathi. Kufanelekile ukumangalisa isiqingatha sakho esingcono kwaye ukonwabele isikhumbuzo sakho, usuku lwakhe lokuzalwa, okanye ukuthatha ixesha lokuzonwabisa. Eyona njongo yethu iphambili kukuvumela iindwendwe zamkele isaci sawo onke amaTaliyane okwenene aphila nge ''Dolce far niente''.
Abantu abaninzi abaziyo kodwa siya kukuvumela ukuba ungene emfihlakalweni - nokuba elona xesha lilungileyo lokutyelela iLake liphakathi kukaMatshi no-Oktobha, iLake Como inemvakalelo emangalisayo ebusika nayo. Ngeemeko ezingqongileyo ezithandekayo zeentaba kunye nelanga elihlala rhoqo, iintsuku ezihlwahlwazayo, ixesha lasebusika lifanelekile ukuba uthathe ixesha lokuphumla kwaye ujabulele: funda incwadi elungileyo okanye udlale imidlalo yonxibelelwano yesikolo esidala ngaseziko (ewe, iNdlu encinci inebhayoloji). indawo yomlilo ye-ethanol), thatha uhambo lokuphumla uye elunxwemeni lwechibi, ndwendwela enye yeevillas ezimangalisayo zembali (ngaphandle kwezihlwele zasehlotyeni), zonwabisa ngokutya kunye newayini yasekhaya okanye ucime ngokulula kwindlela exakekileyo yemihla ngemihla. Kwabo bonwabela ubusuku beTV ngamaxesha athile, uya kufumana i-32 '' smart TV kwigumbi lokuhlala (eneeapps ezithe ngqo kwiNetflix, iSpotify, njl. , nangona singacebisa ubomi obungebubo ubuchwephesha obumnandi apha :-). Idolophu ekufutshane yeComo inentaphane yenkcubeko kunye nokuthenga okunokwenzeka ebusika ngokunjalo.
Amanqaku abalulekileyo awongezelelweyo:
- Sithatha ukucoca kunye nokubulala iintsholongwane njengento ebaluleke kakhulu. Sisebenzise inkqubo yokucoca ngamandla necokisekileyo ukuze siqinisekise impilo nokhuseleko lwakho.
- Siyazithanda izilwanyana zasekhaya kwaye zamkelekile
- Kukho i-EUR e-2 ngomntu ngobusuku berhafu yedolophu (ehlawuliswa ngumasipala kubakhenkethi bonke), ekufuneka ihlawulwe ekufikeni.
IPognana Lario yidolophu encinci yakudala yokulala, efumaneka lula phakathi kweComo neBellagio. Inomoya ongasemva kakhulu.Umfanekiso weTorno yimizuzu eli-10 kuphela yokuqhuba. Idokhi yesikhephe sikaWonke-wonke ukusuka apho unokuthatha khona isikhitshane ukuya e-Como okanye e-Bellagio, umzekelo, yimizuzu eli-15 kuphela yokuhamba.Ukumisa ibhasi ukuya eComo naseBellagio kukuhamba ngomzuzu omnye. Kukho ivenkile entle yegrosari enayo yonke into oyifunayo kunye nebar enkulu yekhefi kanye ecaleni kwendlu kunye neendawo zokutyela ezininzi ezintle ngaphakathi kufutshane.I-Pognana ikwabonelela ngesiseko esihle sokuhambahamba ecaleni kwe "Strada Vecchia Regina" edumileyo. Isilogeni sikaPognana Lario sithi: ''Ezona mbono zokutshona kwelanga eLake Como'' kwaye indlu yethu ihlala kuyo ngokwenene.
Ungandifumana nanini na ngefowuni yam ephathwayo okanye nge-imeyile.
Inombolo yomthetho: REP_PROV_CO/CO-SUPRO/0043955
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Pognana Lario